Qaabka ugu fiicaan oo naagta ninkeeda ugu siigayn karto ka hor Ciyaarta toosan | Gaaloos.com
Home » galmada » Qaabka ugu fiicaan oo naagta ninkeeda ugu siigayn karto ka hor Ciyaarta toosan
Qaabka ugu fiicaan oo naagta ninkeeda ugu siigayn karto ka hor Ciyaarta toosan
Waxaa ugu fiican inuu ninka dhabar dhabar u seexdo kaddib ay saliid soo qaadato xaaska markaas ay daliig ku samayso si fudud oo raaxo lex iyadoo ku dhahaysa ereyo macaan sida aboowe bahalkaagu aad buu u weyn yahay aad buuu kulul yahay, kaddib qooraha ay aayar u salaaxdo.
Waayo qooraha aad bay u dareen badan yihiin,siigada xaaska ninkeeda u siigaynayso waa xalaal layskuma hayso, wax dhib ay leedahayna ma jiraan, balse marka bahalka lagu daliigo saliid oo la jiijiido taasi waxay keenaysaa inuu kobco oo uu sii dheeraado, dad takhaatiirta ku takhasusay galmada waxay sheegaan ninka raba inuu weyneeyo bahalkiisa habeen kasta sakiid ha mariyo markaas ha ku daiigo.
Sida la og yahay naagaha marka ay da; noqdaan waxay kahelaan bahalka weyn oo dheer waayo aad buu dhergiyaa kacsi hayo ayuu daawou yahay, laakin gabdhaha yaryar kama helaan wax weyn waxay ka helaan wax kintirka iyo faruuraha siilka riix riixayo sidaa awgeed naagaha qaarkood farayska ayay jacelyihiin gabdhaha seegaysto sidoo kale siilkooda ayay salaaxaan siiba kintirka iyo faruuraha.
Title: Qaabka ugu fiicaan oo naagta ninkeeda ugu siigayn karto ka hor Ciyaarta toosan